Power Hover, iyo app yevhiki paApp Store | IPhone nhau
Power Hover, robot skier ichitsvaga mabhatiri muapp revhiki
Isu tatova neapp nyowani yevhiki, kunyangwe ruzhinji rwuri mitambo yatinogona kudaidza yevhiki nevhiki App Store kusimudzira "mutambo wevhiki." Ino nguva, mutambo unodaidzwa Power Hover, zita rekuti isu tichafanirwa kudzora robhoti pamusoro pehoverboard yavo kuti titore simba rakabiwa kubva munharaunda yavo uye vasina kwavanogona kurarama.
Power Hover ndeye mhando yemumhanyi, asi zvakanyanya seTemberi Run kupfuura yaRayman, ndiko kuti, yakatwasuka uye kwete yakatwasuka. Tiri munzira, pamusoro pekunge tichifanira kutora mabhatiri, isu tinowana marampu, mapaipi uye zvipingamupinyi zvakawanda zvatichafanirwa kukunda kuti tisvike kumagumo edanho uye tiende kunotevera. Zvine musoro, zviri nyore kuti nguva dzekutanga dzatinopfuura nhanho yega yega isu tinomhanyira mune imwe yezvipingamupinyi kanoverengeka, sezvauri kuona muvhidhiyo inotevera
Power Hover, inonakidza mumhanyi iyo inovandudza padanho rega rega
Haugone kutaura kuti Power Hover mifananidzo ndeye akanakisa, asi chikamu cheizvo vavaki vemitambo vaida kuita. Uye, sezvandinogara ndichitaura, mutambo unofanirwa kusekesa, kuvaraidza, kutinetsa uye kwete kutiratidza mifananidzo yakanaka inopa mashoma Gameplay uye yakawanda ye "movie".
Zvichida imwe yesimba rePower Hover iri nyaya yake. Kusiyana nemimwe mitambo inozivikanwa umo isu tinongofanirwa kudzora protagonist nhanho mushure mematanho, mukushandisa kwesvondo rino tichaburitsa pachena nyaya ichatibata uye inoita kuti tide kuramba tichitamba.
Chero zvazvingaitika, zvakanakisa zvatingaite kurodha pasi mutambo izvozvi zvazviri vakasununguka kwemazuva manomwe, ibatanidze neApple ID yedu wobva wafunga kuti woisiya ichiiswa kana kwete. Ini ndinofunga kuti kana iwe ukazviedza, iwe uchaisiya pane yako iPhone.
Power Hover4,99 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Power Hover, robot skier ichitsvaga mabhatiri muapp revhiki
Auxo 3 yakagadziridzwa uye ikozvino inowirirana neIOS 9.3.3 Jailbreak